nmn အမှုန့် fi အမှုန့်, ​​tadalafil အမှုန့် - ထုတ်လုပ်သူ RFQ
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ဘို့ Thank you! ကျနော်တို့မကြာမီသင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်, သို့ပြန်လာ နေအိမ် ပိုပြီးစာမျက်နှာသို့မဟုတ်ကြည့်ရှု ကုန်ပစ္စည်းများ.
(အရာရှိတဦးကအီးမေးလ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ရန်စာရင်းပေးပို့ပါ[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]) နှင့် quotation အငွေပေးချေမှုသက်တမ်းနှင့်အတူပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။
ငွေပေးချေမှုပေးအပ်နှင့်ကှကျလက်ခံ & လိပ်စာ။
ကုန်ပစ္စည်းများကိုခြေရာခံနံပါတ်၊ အထုပ်ပုံ၊ ခြေရာခံခြင်းနံပါတ်နှင့်ရောက်ရှိမည့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတို့ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးမည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တချို့ထုတ်ကုန်အခမဲ့နမူနာအဖြစ်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင်ကရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ပေးဆောင်လျက်ရှိရ၏။
COA, HPLC, HNMR ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအမိန့် ကုန်ကြမ်းအမှုန့် ထွက်စလှေတျတျောခံကုန်ပစ္စည်းများမတိုင်မီငွေပြန်အမ်းနိုင်ပါတယ်။
1 ~3ရက်အတွင်းငွေပေးချေပြီးနောက်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ (မပါဝင်တရုတ်အားလပ်ရက်) ။
ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အတွက်သင်တို့သည်ငါတို့၏တွေ့နိုင်ပါသည် ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် နှင့် ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများကို ကောင်းသောအဖြေကိုရှိလိမ့်မည်